Vaovao - trano fanatobiana vy
Ny trano fanatobiana vy amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny andian-tsarimihetsika vy, ao anatin'izany ny tsanganana vy, ny tadin'ny vy, ny purlin sns. Ireo singa lehibe ireo dia mandrafitra ny firafitry ny entana ao amin'ny trano fanatobiana entana. Noho ny lanjany maivana sy amin'ny fanamboarana mora dia misy fangatahana lehibe ho an'ny trano fanatobiana vy. Ny strucutre vy ihany koa no karazana fananganana lafo indrindra amin'ny tetikasa maro. Noho izany, tonga ny fotoana hividiananao vola amin'ny trano fanatobiana vy amin'ny fandinihana ara-toekarena maharitra.
Famolavolana trano firafitra vy
Ny firafitry ny vy amin'ny ankapobeny dia heverina ho fomba ara-toekarena sy haingana indrindra amin'ny fananganana ny trano fitahirizanao, ka mahatonga azy io ho safidy ambony indrindra amin'ny tranobe indostrialy sy sivily. Izahay dia manome ny famolavolana trano fitehirizana vy, ary miankina amin'ny fampiharana anao manokana sy ny famaritana anao, ny faritra vy dia hamboarina amina endrika sy habe samihafa.
Ny trano fanatobiana vy dia karazana tranobe fananganana, izay ny firafitry ny zana-kazo dia ahitana andry sy andry vy. Ny firafitry ny vy dia azo atao amin'ny fihodinana mafana na mangatsiaka. Ho an'ny tafo sy tontonana rindrina dia manome takelaka vy, vera fibre, safidy tontonana pu sandwich PU sns. Ny firafitry ny tafo metaly miolakolaka dia safidy tsara ho an'ny tetikasanao koa. Ny varavarana sy ny varavarankelin'ny trano fitehirizana rafitra vy dia azo vita amin'ny alimina PVC na aliminioma. Mikasika ny rafitra mpanohana purlin, ny rindrina sy ny rindrina amin'ny tafo, ny karazana C ary ny karazana Z dia azonao atao hisafidianana. Ho fanampin'izay, ny andry fihazakazahana crane dia natao araka ny mason-tsivana amin'ny crane overhead anao.
Mikasika ny fepetra takinao manokana momba ny refy trano fitehirizana vy ary koa ny toetoetran'ny tontolo iainana eo an-toerana, ny trano fanatobiana vy dia azo foronina amin'ny endrika sy habe mifanaraka amin'izay ilainao.
Fa maninona no tokony hifidy rafitra vy?
Betsaka ny antony tokony hifidiananao ny firafitra vy ho an'ny trano fitehirizana.
1. Mahomby amin'ny vidiny. Raha ampitahaina amin'ny tranobe vita amin'ny beton nentim-paharazana dia ambany kokoa ny vidin'ny fananganana trano fitehirizana vy. Ny singa rehetra dia hamboarina ao amin'ny ozinina, ao anatin'izany ny fandavahana, ny fanapahana ary ny fantsom-bokatra, ary apetraka eo an-toerana, ka hampihena be ny vanim-potoana fananganana.
2. Hery lehibe. Ny fananganana firafitry ny vy dia manolo ny beton nohamafisina tamin'ny takelaka vy na fizarana vy, izay manana tanjaka avo kokoa ary mahatohitra tsara kokoa ny horohoron-tany.
Fiarovana amin'ny tontolo iainana. Ny trano fanatobiana vy vita amin'ny vy dia mora kokoa amin'ny tontolo iainana satria azo ampiasaina amin'ny tetikasa hafa, ka hampihena be ny fako amin'ny fanamboarana.
4.Fametrahana mora. Ireo trano fanatobiana vy ireo dia azo vorina mora foana ary hatsangan'ny mpiasa, ka mahavonjy ny vidin'ny mpiasa sy ny asa.
5. maharitra mateza. Ny rafitra vy dia mahazaka toe-piainana mafy, ary amin'ny alàlan'ny firakotra miaraka amin'ny loko tsy misy afo sy ny alim-bolan'ny alimina, dia hisorohana ny afo sy ny harafesina izany. Noho izany, maharitra ny androm-piainany.
6. azo itokisana. Ny firafitry ny vy dia mahazaka fiatraikany sy ny enta-mavesatra mavesatra, ary koa amin'ny fahombiazan'ny seismika tsara. Ankoatr'izay, ny firafitry ny vy dia mitovy.